I-AJABU NYUMBA Villa ene-pool kwi-300mt ukusuka elwandle - I-Airbnb
I-AJABU NYUMBA Villa ene-pool kwi-300mt ukusuka elwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguFulvio
IVilla ikufuphi neWatamu ilungele iintsapho ezinabantwana. Yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukusuka kulwandle oluhle ngakumbi lweWatamu(URL HIDDEN) Iivenkile, imarike yeziqhamo kunye neendawo zokutyela zikufutshane kwaye kumgama wokuhamba. Abasebenzi benkonzo baquka umpheki okhoyo ukuba alungiselele naluphi na uhlobo lokutya . Unokwenza ukupheka ekhaya intlanzi ethengwe ngokuthe ngqo kumlobi olwandle. Iindleko zompheki ukupheka ukutya yi-1000Ksh ngosuku.
I-villa inemigangatho emibini: kumgangatho wokuqala we-terrace yindawo ehlala phantsi kwe "makuti" (uphahla oluqhelekileyo lwaseAfrika) olujongene nedama kunye negadi yaseTropiki.
Kumgangatho osezantsi kukho igumbi leendwendwe elinabantu abane (inebhedi elala abantu ababini, ibhedi elala abantu ababini kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo) kunye nelinye igumbi lababini elineebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela labucala. Igumbi lokuhlambela elongezelelweyo elineshawa ngaphandle kwamagumbi liyafumaneka kwiindwendwe.
Inkonzo yokucoca amagumbi kunye nelinen ifakiwe.
Ngesicelo kunokwenzeka ukwenza amalungiselelo okudluliselwa kunye nokusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMombasa
Isetyenziswa nini nodwa phandle amanzi anetyuwa ipuli ende
4.88 · Izimvo eziyi-59
Le ndawo ikufuphi kakhulu neelwandle ezimbini ezahlukeneyo kunye neevenkile ezinkulu, iivenkile ze-ayisikrimu kunye nemarike yeentlanzi apho unokuthenga iintlanzi ezixabiso liphantsi ukunika u-Omari ukuba azipheke!
Nangona ingeyondlu yangaphambili elunxwemeni, unokufikelela ngokulula kulwandle lwaseWatamu kunye ne-Sun palm beach ukuhamba okanye nge-tuk tuk ukuba ufuna ukufikelela kwezinye iilwandle ezikude kakhulu.
Kodwa ukuba uyakonwabela ukuhamba kwaye ufuna ukuzigcina usempilweni unokwenza uhambo olumnandi okanye ukubaleka kwisanti emhlophe kwaye ufike kuzo zonke iilwandle ngeenyawo (iyure enye yokuhamba)
Umbuki zindwendwe ngu- Fulvio
I go to Watamu since 1989. In these years the village has changed but it has kept its charm. Eight years ago I brought a small plane in Africa (I spent 5 fantastic and unforgettable days!) and now I fly over the sea and over wildlife (Website hidden by Airbnb) you remember “out of Africa”??? I started the business of selling ultralight aircraft: perfect to really enjoy Africa also from the sky.
I go to Watamu since 1989. In these years the village has changed but it has kept its charm. Eight years ago I brought a small plane in Africa (I spent 5 fantastic and unforgettabl…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Watamu